MCB မိုဘိုင်းဘဏ် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ သုံးစွဲသူ Customer များအတွက်အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး Mobile Phone မှတစ်ဆင့် မိမိတို့၏ ဘဏ်စာရင်းအချက်အလက် အချက်အလက်များအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ခြင်း၊ လွယ်ကူ လျှင်မြန်စွာဖြင့် ငွေလွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း အစရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအား လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးသော Application ဖြစ်ပါသည်။
လူကိုယ်တိုင်ဘဏ်သို့ လာရောက်စရာမလိုပဲ မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံးရှိရုံဖြင့် အချိန်နှင့် လူသက်သာစွာဖြင့် (၂၄/၇) ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအား လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း။
မိမိစာရင်း ငွေလွှဲပြောင်းခြင်းများကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း။
မိမိ၏ လျှိူ့ဝှက်နံပါတ်အား ပြောင်းလဲလိုပါက အလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း။
ပိုမိုသောဝန်ဆောင်မှုများအား မကြာမှီအချိန်အတွင်း ထပ်မံ မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။
မိမိတို့၏ ဖွင့်လှစ်ထားသောဘဏ်စာရင်းအချက်အလက်များကို MCB Mobile Application ရှိ Dashboard စာမျက်နှာမှ တစ်ဆင့် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
ကိုယ်ပိုင်အကောင့်အချင်းချင်း ငွေလွှဲပြောင်းခြင်း/ အခြားသူ၏ဘဏ်စာရင်းအကောင့်ထဲသို့ ငွေလွှဲပြောင်းခြင်း (Own Transfer/ Other Account Transfer)ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ငွေပေးငွေယူ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ပတ်သတ်သည့် မှတ်တမ်းများကို(၁၀)ကြောင်းအထက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးလိုလျှင် ရက် (၉၀)အထိပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
ချက် (Cheque Book) စာအုပ်တောင်းခံခြင်း၊ ချက်လက်မှတ်ပိတ်သိမ်းခြင်း (Stop Cheque) များအားဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
ချေးငွေစာရင်း လုပ်ဆောင်ချက်များအား ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
မိမိ၏ လျှိူ့ဝှက်နံပါတ်အား ပြောင်းလဲလိုပါက အလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
ဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများ ငွေထုတ်စက် တည်ရှိရာနေရာများအား ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်းနှုန်းထားများအားး အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
MCB မိုဘိုင်းဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုအားမှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်အတွက် လျှောက်ထားသူသည် MCB ၌ စုငွေအပ်ငွေစာရင်း သို့မဟုတ် ချေးငွေစာရင်းရှိရပါမည်။
Transfer MCB MM to MCB USD account or MCB USD to MCB MM account Fee Waived(but will be converted with MCB daily exchange rate)
MCB Mobile Banking Application ကို Google Play Store နှင့် Apple Store , Huawei App Gallery တို့မှ Download ရယူပြီး နီးစပ်ရာ MCB ဘဏ်ခွဲများသို့ သွားရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
MCB Mobile Application ကို မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်တွင် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသော မည်သူမဆို လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ (ဖုန်းနံပါတ် နှင့် အီးမေလ်သာလိုအပ်ပါသည်။)
*MCB reserves the right to introduce charges on mobile banking in the future.
MCB mobile banking ကို ဘယ်လို စာရင်းသွင်းရမလဲ။
MCB mobile banking “MCB mBanking” app ကို Google Play Store၊ ဒါမှမဟုတ် Apple Store ကနေ တိုက်ရိုက် download ယူ၊ install လုပ်ပြီး၊ အနီးဆုံး MCB ဘဏ်ခွဲမှာ စာရင်းသွင်းနိုင်ပါတယ်။
MCB mobile banking စာရင်းသွင်းဖို့ ဘာတွေလိုမလဲ။
လက်ရှိ customer တွေက အနီးဆုံး MCB ဘဏ်ခွဲကိုသွားပြီး ဖောင်ပုံစံမှာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ ဖြည့်စွက်လို့ User ID ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။
Customer အသစ်တွေကတော့ အနီးဆုံး MCB ဘဏ်ခွဲကိုသွားပြီး စာရင်းတစ်ခု ဖွင့်ရပါမယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ MCB mobile banking အတွက် စာရင်းသွင်းဖို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
MCB mobile banking အတွက် ဘယ် User ID ကို သုံးရမလဲ။
မှတ်မိလွယ်မယ့် ဘယ်လိုအမည် (သို့) စာလုံးကိုမဆို ပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အက္ခရာ စာလုံးကြီးတစ်ခု ပါဝင်ပြီး ကိန်းဂဏန်းအက္ခရာ ၆ လုံးကနေ ၁၂ လုံးအထိ ရှိရပါမယ်။
MCB mobile banking အသုံးပြုဖို့ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှု လိုပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ မိုဘိုင်းဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် အင်တာနက်အချိတ်အဆက် လိုပါတယ်။
နိုင်ငံရပ်ခြားကနေ MCB mobile banking သုံးလို့ရလား။
ဟုတ်ကဲ့။ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်နေရာကမဆို သုံးနိုင်ပါတယ်။
MCB mobile banking ရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
အချိန်ကုန်သက်သာပါမယ်။ ခရီးစရိတ် ကုန်ကျစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
MCB မှာ ရှိတဲ့ ဘယ်စာရင်းကိုမဆို လွယ်လင့်တကူ ငွေလွှဲနိုင်ပါတယ်။
ဘဏ်ခွဲကို သွားစရာမလိုဘဲ ချက်စာအုပ် တောင်းခံခြင်း/ချက်လက်မှတ် ပိတ်သိမ်းခြင်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။
MCB mobile banking မှာ ဘယ်စာရင်းအမျိုးအစားတွေကို သုံးလို့ရလဲ။
MCB မှာ ရှိထားတဲ့ လူကြီးမင်းရဲ့ အပ်ငွေ၊ ချေးငွေ စာရင်းအကုန်လုံးကို သုံးလို့ရပါတယ်။
မိုဘိုင်းဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုမှာ ငွေလွှဲမှတ်တမ်း ဘယ်နှစ်ခုကို ပြန်စစ်လို့ ရလဲ။
Recent Transaction စာရင်းထဲမှာ နောက်ဆုံးငွေလွှဲမှု ၁၀ ကြိမ်ကို ပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ငွေလွှဲမှတ်တမ်းတွေကို ဘယ်လောက်ကြာကြာ ပြန်ကြည့်လို့ ရလဲ။
နောက်ဆုံး ရက် ၉၀ အတွင်း ငွေလွှဲမှတ်တမ်းတွေကို ပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ငွေလွှဲမှု အောင်မြင်ကြောင်း ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ။
ငွေလွှဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ application က အခြေအနေကို ဖုန်း/tablet ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာ ဖော်ပြပါမယ်။ SMS အကြောင်းကြားစာကိုလည်း လူကြီးမင်းအနေနဲ့ လက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်နည်းကတော့ ငွေလွှဲမှုမှတ်တမ်းမှာလည်း ဝင်စစ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
MCB mobile banking အတွက် ဘယ် OS version တွေ သုံးလို့ရလဲ။
iPhone နဲ့ iPad ဆိုရင် iOS version9နဲ့ အထက်
Android ဖုန်းနဲ့ tablet ဆိုရင် Android version 5.0 နဲ့ အထက် ရှိရင် သုံးနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဖုန်း ပျောက်သွားပါတယ်။ (သို့မဟုတ်) ဖုန်းအခိုးခံရလို့ပါ။ ဘာလုပ်ရမလဲ။
လူကြီးမင်းရဲ့ဖုန်း ပျောက်ဆုံးသွားတယ် (သို့) အခိုးခံရတယ်ဆိုရင် MCB hotline နံပါတ် +95 12399663 ကို ချက်ချင်းခေါ်ဆိုပြီး ဘဏ်ရဲ့ helpdesk team ကို လူကြီးမင်းရဲ့ ဖုန်းကို ပိတ်ပေးဖို့ အကြောင်းကြားပါ။ လူကြီးမင်းရဲ့ User ID နဲ့ password ကို မသိဘဲ ဝင်ရောက်သုံးစွဲလို့မရဘူးဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်း လုံခြုံစိတ်ချရစေဖို့ User ID နဲ့ password ကို ဘယ်သူ့ကိုမှ ပေးမသိပါနဲ့။
ဖုန်း/tablet အသစ်မှာ ကျွန်တော် account ကို သုံးချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
MCB hotline နံပါတ် +95 12399663 ကို ခေါ်ဆိုလိုက်ပါ။ ဘဏ်ရဲ့ helpdesk team က လူကြီးမင်းရဲ့ ဖုန်း/tablet အသစ်မှာ သုံးလို့ရအောင် activate လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
Mobile Banking မှာ Joint Account တွေကို ဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရနိုင်မလဲ ?
Joint Accounts များအတွက်ကိုမူ ပါဝင်စာရင်းဖွင့်လှစ်သူများအားလုံး၏ သဘော တူညီ မှုရရှိမှ
သာ စာရင်းအသွင်းအထုတ်လုပ်နိုင်မည့် (၂) ဦးအနက် တစ်ဦးဦးကလည်းကောင်း Accounts
အား စာရင်းဖွင့်ရာတွင် ပါဝင်သူအားလုံးမှ စာရင်းအသွင်းအထုတ်ပြုလုပ်ခွင့်ရသာရရှိမှာဖြစ်ပြီး၊
ပါဝင် စာရင်း ဖွင့်လှစ်သူများထဲမှ တစ်ဉီးတစ်ယောက်ချင်းစီမှလဲ စာရင်း အသွင်းအထုတ် လုပ်နိုင်
မည့် တစ်ဦး တည်းဖြင့် လည်းကောင်း Accounts အား ပါဝင်သူအားလုံးမှ စာရင်း အသွင်း အ
ထုတ်အား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ခွင့်သာ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
မိမိရဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာကမဆို စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ (24/7)